Aagan Fm ३० लागिन् अनुष्का : यस्ता छन् उनका १० कुरा
१९ बैशाख, २०७५
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलबारबाट ३० वर्ष लागेकी छन्। १ वर्ष अगाडी शाहरूख खानसँग जोडी बाध्दै ‘रब ने बना दि जोडी’बाट बलिउडमा लोभलाग्दो डेब्यू गरेकी अनुष्काले त्यसयता फर्केर हेर्नुपरेको छैन। धैरेले यस्तो हुनुमा उनको फिल्म छनौटलाई कारक मानेका छन्। उनी अभिनयसँगै फिल्म निर्मात्रीका रूपमा पनि बलिउडमा ‘नोटिस’ भइसकेकी छन्। गैर-बलिउडको पृष्ठभूमिका बाबजुद अनुष्काको उपस्थिति बलिउडमा दमदार छ। गएको वर्ष आफ्नो प्रेमी तथा भारतिय क्रिकेटका कप्तान विराट कोहलीसँग विवाहवन्धनमा बाँधिएकी अनुष्काका बारेका १० कुरा यस्ता छन्:
१. उनको जन्म सन् १९८८, मे १ मा बैङलोरमा एक सैनिक परिवारमा भएको थियो। उनका मातापिताको खासमा उत्तराखण्डका हुन्। उनी सानैदेखी मोडल बन्ने चाहना राख्थिन्। मोडल बन्नेसँगै उनी पत्रकारितामा पनि आउन चाहन्थिन्।
२. बलिउड लाइफ डटकमका अनुसार रणविर कपुरले अनुष्का श्रमालाई ‘बम्बे भेलबेट’को सुटिङका क्रममा रूवाएका थिए। अनुष्का आफूलाई गोप्य नै राख्न चाहन्छिन तर रणवीर सुटिङका क्रममा आफ्ना सहकर्मी कलाकारसँग हाँसोठट्टा गर्न मनपराउँछन्। यस्तैमा सुटिङका क्रममा रणविरले अनुष्कालाई यति धेरै सताएकी उनी रणवीरको हर्कतबाट हैरान भएर रोइन् नै। यसका बाबजुत पनि अनुष्काको नजरमा रणवीर राम्रो मान्छे र कलाकार हुन् जसप्रति उनलाइ सदैव सम्मान छ।
३. ‘रब ने बना दि जोडी’ तथा ‘ब्यान्ड बाजा बारात’मा गरेको कामका लागि धेरै प्रशंसा बटुलेकी अनुष्काले दुबै फिल्मबाट ‘फिल्म फेयर अवार्ड’ जित्न भने असफल रहिन्। यध्यपी उनी मनोनयनमा भने परेकि थिइन्। यी दुबै फिल्मबाट अवार्ड नपाउँदा अनुष्का रोएकी थिइन। एक अन्तरवार्तामा उनले आफू अवार्डको हकदार भएपनि नपाउँदा दु:ख लागेर रोएको खुलासा गरेकी थिइन्। त्यो समय सो अवार्ड असिनले जितेकी थिइन्।
४. ‘रब ने बना दि जोडी’को स्क्रिन टेस्टका लागि अनुष्काले पूरा एकदिन लगाएरर तयारी गरेकी थिइन। उनले सो फिल्मका लागि बिना तयारी अडिसन अस्विकार गरेकी थिइन्। अडिसनपछि फिल्मका निर्देशक आदित्य चोपडाले अनुष्कालाई अडिसनमा आएमध्ये सबैभन्दा राम्री केटी उनी नभएको बताएका थिए तर उनले आफ्नो प्रतिभाको बलमा सो फिल्ममा छानिन सफल भइन्। फिल्मा छानिएपछि उनले मोडल बन्ने सपना त्यागिन्।
एक अन्तरवार्तामा अनुष्काले आफू मोडलका रूपमा उपयूक्त नभएको बरू एउटा राम्रो कलाकार भएको बताएकी थिइन्। ‘म र्याम्पमा हिँडथे र मुस्कुराउँथे तर उनीहरू मलाई ब्ल्यान्क लुक दिन भन्थे। मेरा लागि नमुस्कुराइ बस्नु असाध्यै गार्हो काम थियो’, अन्तवार्तामा उनले भनेकी छन्।
५. ‘रबने बना दि जोडी’को सुटिङका क्रममा आफ्नो जोडी बनेका शाहरूख खानसँग काम गर्ने क्रममा आतिएकी थिइन। शाहरूख खानले अनुष्कालाई नआतिन भन्दे हौसला दिएका थिए। उनले अनुष्का राम्रो अभिनय गर्ने भएकाले आफूले अभिनयको सट्टा प्रतिक्रियामात्र जनाए पुग्ने भन्दे फुर्काएका थिए।
६. अनुष्काका लागि प्रत्येक अभिनेत्री उनका प्रतिष्पर्धी हुन्। उनले म आफू आफैसँग प्रतिष्पर्दा गरिरहेकी छु भनेर नभन्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन। उनले बलिउडमा हर कोही राम्रो रोलको खोजीमा रहने भएकाले मेरो प्रतिष्पर्दी छैनन् भन्नुको कुनै अर्थ नहुने उनको धारणा छ।
७. उनले ‘ब्यान्ड बाजा बारात’ फिल्मका लागि दादासाहेब पाल्के पुरस्कार जितेकी थिइन्। उनी सो वर्ष १९ विभिन्न अवार्डमा मनोनित भएकी थिइन जसमध्ये १० अवार्ड उनले जितिन्। अनुष्काले ‘जब तक हे जान’को लागि एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड जितेकी छन्। उनले सो अवार्ड सहअभिनेत्रीतर्फ जितेकी हुन्। सो समय उनको र रणवीर संहको प्रेमप्रसंगले पनि गतिलै चर्चा पाएको थियो।
८. खाली समयमा अनुष्का आफ्ना साथीहरूसँग समय बिताउन र सुत्न मनपराउँछिन्। उनलाई किताब पढ्नमा पनि विशेष रूचि छ भने फिल्म हेर्नमा पनि उनको रूचि छ। ‘द स्वसाङ रेम्सन’, ‘लाइफ इज ब्यूटिफूल’, ‘इन दि मुड फर लभ’, ‘फस ट्याङ्क’, जब वी मेट’, ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाँयेगे’, ‘चक दे इन्डिया’ तथा ‘दिल से’ उनलाई मनपर्ने सिनेमा हुन्। अनुष्काको प्रिय रंग कालो हो भने उनी हाल अर्थशास्त्रमा मासट्रस गरिरहेकी छन्।
९. अनुष्का आफूलाई केटा जस्तो ठान्दछिन्। उनी केटीभन्दा केटासाथीहरूसँग ज्यादा घुलमिल हुन रूचाउँछिन्। उनको फेसबुकमा ३.६ मिलियन माथी लाइक छ।
१०. अनुष्काको नजरमा साइज जिरो एउटा भ्रम हो। उनले साइज जिरो बच्चाहरू हुने भएको बताउँदै १७-१८ काम गर्ने मान्छे त्यती पातलो भएर कसरी बाँच्न सक्छ? उनी प्रश्न गर्छिन्। उनले आफू दैनिक काम गर्ने दैनिक उसैगरी खाने बताउँछिन्।